होसियार ! ‘मुख थुन्ने कानुन बन्दैछ,अब सरकारका अरिंगाल मात्र सुरक्षित हुन्छन्'(भिडीयो ) - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले ल्याइरहेका विधेयकहरु, उसले अभ्यास गरिरहेको नियन्त्रणमुखी व्यवहारको चर्को आलोचना गरेका छन् । बैठकमा सांसद थापाले सरकारले आफ्नो दम्भ देखाएर जनताको मुख थुन्न खोजेको आरोप लगाउँदै सुचना प्रविधि विधेयकको विरोध गर्दै प्रनेश गौतमलाई चलचित्रको समीक्षा गरेकै भरमा हिरासतमा लिएकोमा विरोध गरे ।
सुचना प्रविधि विधेयक र मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयककोले अब चलचित्रकर्मी पनि सुरक्षित नरहेको थापाको भनाई थियो । उनले भने, ‘चलचित्रकर्मी साथीहरु त्यसकारणले गर्दा होसियार। तपाईको कथा संवाद गीतमा अब कसैलाई जिस्क्याउने कन्टेन्ट छ भनेर प्रदेश गौतमको ठाउँमा अब हिरासतमा अब सम्भवत तपाई बस्नुपर्ला । त्यो पनि अब केही दिनका लागि हैन पाँच वर्षका लागि ।’
केही दिनअघि बेलायतको अक्सफोर्ड युनियमा मन्तव्य राख्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘देशलाई समृद्ध बनाउन अभिव्यत्ति स्वतन्त्रताको महत्त्व कति हुन्छ भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पक्कै पनि यो बेलायतका बारेमा कुरा गर्नुभएको हो । नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हालत, यहाँ सरकारले के गरिरहेको छ, हामी सबैलाई थाहा छ ।
शासकीय शैलीमा प्रश्न गरियो भनेर पशुपति शर्माको गीत बन्द गर्न लगाएको अस्ति मात्रै हो । सनातनदेखि चलिआएको संस्कृतिको दायित्व बोकेको राज्यले गुठीलाई मासेर नेपालको सांस्कृतिक पहिचान मास्ने षड्यन्त्रविरुद्ध मुख थुन्न लाठी र पानी फ्याँकेको त झन् अस्ति मात्रै हो ।
एब्संडिस्ट ह्युमरको विधामा रहेर एउटा चलचित्रको समीक्षा गरेबापत प्रनेश गौतम बिनाकारण केही दिनदेखि हिरासतमा छन् । यी केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् ।
घटना घट्यो भन्दा पनि सरकारले यसलाई कसरी लियो भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो । स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता होइन भन्दै यी प्रत्येक घटनामा सरकारको भूमिका ठीक भएको भन्ने सरकारको दलिल छ । र, यो नै डरलाग्दो छ ।
हाम्रो संविधानले विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्तत्रतालाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्दै भन्छ, यो आधारभूत अधिकारको हकमा हो ।
कसैले दिने होइन, कसैबाट पाउने होइन । यो अहरणीय छ । हो, हाम्रो सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, अखण्डता, हाम्रो जातजाति र धर्मबीच खलल पुर्याउने खालका कुनै अभिव्यक्ति भयो भने जातीय भेदभाव छुवाछुत वा दुरुत्साहन गर्ने भयो भने वा गाली बेइज्जत गर्ने अवस्था भयो भने प्रतिबन्ध लगाउन पाइन्छ ।
कोही व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा राज्य, समाज वा अर्को व्यक्तिलाई अपुरणीय क्षति पुर्याउने अवस्था नबनोस् भनेर अपवादका रूपमा यो व्यवस्थाको प्रयोग हुन्छ भन्ने मानिएको हुन्छ ।
यो नै नरम बन्न गयो भने स्थिति डरलाग्दो हुन्छ । जुन अहिले बन्न जाँदै छ । किनकि, यहाँ त सरकारी संरक्षणमा व्यक्तिको आत्मसम्मानलाई ध्वस्त गर्ने गरी गाली बेइज्जत गरिरहन पाउने ।
तर, सरकारलाई मन नपर्दा गाली बेइज्जत, शिष्टाचार वा नैतिकताको नाममा जुनबेला मन लाग्यो, जसको जतिखेर जहाँ मन लाग्यो, त्यही ठाउँमा गएर मुख थुन्न पाउने गरी कानुन सरकारले बनाउन लागेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदको विरोधका बाबजुद संसदबाट पारित गर्न खोजिएको सूचना प्रविधि विधेयक भन्छ, कुनै पनि व्यक्तिलाई जिस्काउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने र धम्काउने आशयले सामाजिक सञ्जालमा सन्देश सम्प्रेषित गरेमा ५ वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिमानाको सजाय भोग्नुपर्नेछ ।
जिस्काउने, झुक्याउने, होच्याउनेको परिभाषा के ?
यस्तै, अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने भन्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१५ मा सिंगल भर्सेस युनियन अफ इन्डियाको मुद्दामा सन् २००२ मा बनेको भारतको सूचना प्रविधि ऐनको दफा ६६ लाई असंवैधानिक भन्दै खारेज गर्यो । हामीकहाँ त भारतको भन्दा कठोर कानुन बनाउन लागिएको छ ।
जिस्काउने र झुक्काउने भनेको के हो ? यसको परिभाषा गर्ने अन्तिम अधिकार सूचना प्रविधि अदालतलाई दिइएको छ । र, याद रहोस्, सूचना प्रविधि अदालतमा रहने तीन जना सदस्यलाई सरकारले आफूखुसी छान्न पाउनेछ ।
सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयकलगायतका सबै विधेयकलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्यो भने यसबाट सरकारको आशय के बुझिन्छ ?
सरकारले के भन्न खोजेको ? सायद, लेखक ब्रजेश खनालले भन्नुभएको जस्तै भन्न खोजेको छ, ‘तँ बोल्, त्यति मात्रै, जे म सुन्न चाहन्छु । तँ हेर्, त्यति मात्रै, जति जे म देखाउन चाहन्छु । तँ सुन्, त्यति मात्रै, जे म सुनाउन चाहन्छु । तेरो स्वतन्त्रताको घेरा मैले कोरेको शून्यभन्दा बाहिर छैन् । किनकि, मलाई चिनेको छस्, म हुँ तेरो सरकार ।’
ब्रजेश खनालले भन्नुभएको जस्तै सरकारको आशय र नियत देखिएको छ ।
चलचित्रकर्मी साथीहरु, होसियार । तपाईंको कथा, संवाद र गीतमा अब कसैलाई जिस्काउने कन्टेन्ट छ भनेर प्रनेश गोतमको ठाउँमा हिरासतमा अब सम्भवत अब तपाईं बस्नुपर्ला, त्यो पनि केही दिनका लागि होइन, ५ वर्षका लागि ।
गुठियारहरु होसियार ! गुठी भनेको समान्तवादी प्रबन्ध हो भन्ने मुखलाई खबरदारी भनेर लेख्दै गर्दा धम्काइएको आरोपमा ५ वर्ष जेल बस्नुपर्ला ।
प्रधानमन्त्रीले पानी जहाज ल्याउँछु भनेर जिस्काउनुभयो भनेर कागजको पानीजहाज बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राख्ने युवक होसियार ।
समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको खिलाफमा कानून बनाइयो भनेर मन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गर्ने होसियार । म त भन्छु, प्रधानमन्त्रीकै पार्टीभित्र रहे पनि फरक मत राख्ने साथीहरु पनि होसियार । किनकि, यहाँ अब कोही पनि सुरक्षित छैन । यो कानून पारित भइसकेपछि कानूनको कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने अहिले नै अनुमान लगाउन सक्छांै ।
यहाँ केवल अब सरकारका अरिंगालहरु मात्रै सुरक्षित रहन्छन् त्यसैले अब म अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा लडेका तमामा नेपालीलाई अपिल गर्न चाहन्छु, यो संसदबाट बहुमतको बलमा एउटा यस्तो कानून पारित गरिँदै छ ।
यो कानून आज एउटाको खिलाफमा प्रयोग हुँदै गर्दा म त होइन नि, अरु कसैको खिलाफमा प्रयोग भएको हो भन्ने ठानिएको छ एउटा युवकको बारेमा प्रयोग हुँदै गर्दा । तर, यस्तै गर्ने अवस्था रह्यो भने एक दिन यस्तो आउनेछ ।
जर्मन कवि मार्टि निमोरले भनेजस्तैः
‘पहिले उनीहरु समाजवादीलाई लिन आए, म बोलिनँ किनकि म समाजवादी थिइनँ ।
उनीहरु टेलिभिजनकर्मीलाई लिन आए, म बोलिनँ किनभने म टेलिभिजनकर्मी थिइनँ ।
उनीहरु जिउजलाई लिन आए, म बोलिनँ किनकि म जिउज थिइनँ ।
जब उनीहरु अन्तिममा मलाई लिन आए मेरो लागि बोल्नका लागि बाँकी अन्तिममा कोही थिएन ।’
यस्तो अवस्था आउँदै छ, उठौं, बोलौं, जागौं, सरकारको यो कानूनको विरुद्ध । यो कानून यो संसदबाट परित हुनु भनेको संविधानको खिलाफ मात्रै होइन, यो हाम्रो आन्दोलन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिलाप हो त्यसैले सबैलाई यो कानूनका बारेमा सुसूचित रहन, बोल्न, लेख्न र जनमन निर्माण गर्न सबैलाई अपिल गर्छु